800 tany hektara no mandrafitra ny zaridainan'i Versailles. Ireo lalana mihodina, 35 lakandrano sy sarivongan-drano km, manaitaitra ireo mpandeha eran'izao tontolo izao. Azo antoka fa, Versailles dia tsara fitsangatsanganana an-andro avy any Paris, ary raha vao tonga ianao dia hoentin'ny hatsaran-tarehiny.
Ny mampiavaka ny zaridaina dia mitoetra amin'ny zavakanto topiary an'ny 150,000 Kitapo vita amin'ny tanana vita amin'ny tànana miorina amin'ny tambajotran'ny lalana toa ny zavona. Manodidina ny chateaux tamin'ny taonjato faha-17 ireo zaridaina ary tsy tazana ny lohasahan'i Dordogne. Ho fitsidihana mahagaga tokoa, amboary ny dianao ny alakamisy hariva, rehefa mandrehitra labozia ny zaridaina.
Fantatra amin'ny anarana hoe Bluhenden Barock amin'ny alemà, midika hoe Baroque mamony, Ludwigsburg Palace Garden dia tsara tarehy. Mitovy amin'ny zaridaina Versailles mandravaka ny tanin'ny lapa, ity zaridaina alemanina ity dia mamony isaky ny lohataona amin'ny raozy, zavamaniry maitso, ary na dia zaridaina aingam-panahy Japoney misy hazo Bonsai aza.
Any ivelan'ny Stuttgart no misy ilay zaridaina, ary izany dia a 30 minitra mandeha fitateram-bahoaka.
Park Zaridaina Sigurta dia paradisa italiana. Ity zaridaina mahatalanjona ity dia noforonina voalohany ho zaridaina kely manodidina ny villa tantsaha. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitatra tamin'ny zaridaina midadasika ankehitriny izy io. Ny zaridaina Giardino Sigurta dia fitoerana masina 1,500 hazo, ary voninkazo iray tapitrisa an'ny 300 karazana isan-karazany izay mamony isaky ny lohataona. Amin'ny fahavaratra dia 18 ireo farihy sy farihy zaridaina dia lasa fitoerana masina ho an'ny mponina sy mpandeha eran'izao tontolo izao.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “10 Gardens tsara tarehy indrindra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-gardens-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#fahavaratra zaridaina kanto europegardens EuropeTraveling Frenchgarden lohataona travelbytrain